बिबाह गर्नु अगाडी केटाका बारेमा जान्नै पर्ने १० कुराहरु – List Khabar
Home / जीवनशैली / बिबाह गर्नु अगाडी केटाका बारेमा जान्नै पर्ने १० कुराहरु
बिबाह गर्नु अगाडी केटाका बारेमा जान्नै पर्ने १० कुराहरु
admin October 31, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 82 Views
विवाह कुनै पनि व्यक्तिको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय हो । त्यसैले यो निर्णय लिनुअघि निकै सोचविचार गर्नुपर्छ, धेरै कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो समाजमा विवाहका लागि केटाले केटी हेर्ने चलन छ । केटीले केटा हेर्ने चलन छैन । प्राय केटीहरुले अभिभावककै निर्णयका आधारमा बिहे गर्ने गर्छन् । तर उनीहरु आफैंले केटाको हरेक पक्षको मूल्यांकन गर्नु अति जरुरी छ किनकी यो जीवन बिताउने सवाल हो । यहाँ हामी विवाहपूर्व केटीले केटाको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु उल्लेख गर्दैछौं ।
१. यो थाहा लगाउनुपर्छ कि केटाको करिअरको लक्ष्य के हो ? उ आफूलाई आगामी ५ वर्षमा कहाँ देख्न चाहन्छ ? २. केटाको धैर्यता कति छ भन्ने जाँचौं । मोबाइल हराउँदा वा कम्प्युटर स्लो चल्दा उसको प्रतिक्रिया महसुस गरौं । ३. केटाको प्रिय ठाउँका बारेमा थाहा पाउने मात्रै होइन उसँग त्यहाँ घुम्न पनि जानुपर्छ । यसबाट केटाको आनीबानी र व्यवहार बुझ्न सजिलो हुनेछ ।
४. केटाले कस्तो लुगा लगाएको छ ? कत्तिको सफा छ ? यी कुराहरु हेरौं । उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जाँच गरौं । ५. व्यक्ति कुन माहोलमा हुर्किएको छ, यसमा धेरै कुरा भर पर्छ । सफासुग्घर भएर बस्ने व्यक्तिले आफ्नो बच्चा तथा श्रीमतीलाई पनि यसैगरी बस्न सिकाउँछ । ६. केटासँग सन्तानको योजनाबारे कुरा गर्नुस । उ कति बच्चा जन्माउन चाहन्छ ? फेमिली भ्याकेसनबारे के सोच्छ आदि बुझौं ।
७. यो थाहा पाउने कोशिष गरौं कि केटासँग लुकेको प्रतिभा के छ ? यदि उसको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउन सकियोे भने आपसी प्रेम झनै झांगिनेछ । ८. थाहा पाउनुपर्छ कि प्रेम र विवाहलाई लिएर उसको धारणा के छ ? इन्टिमेसीको विषयमा दुवैको सोच मिल्छ कि मिल्दैन । केटाको फिलिङ्स पत्ता लगाउनुपर्छ । ९. केटाको पढाईलेखाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । उसले कुन विषयमा कुन तहसम्म पढेको छ भन्ने कुरा सबैभन्दा सुरुमा पत्ता लगाउनुपर्छ । १०. केटा मिहिनेति छ कि छैन भन्ने कुरा पनि उत्तिकै अहम् छ । त्यसैले विहे गर्नुअघि उ अल्छे छ कि मिहिनेति छ भन्ने पनि पत्ता लगाउनुपर्छ ।
प्रेमलाई बुझ्ने कि व्यक्त गर्ने ? संभवत कतिपयलाई यसबारे जानकारी नहुन पनि सक्छ । अंग्रेजी क्यालेन्डर अनुसार फेब्रुअरी १४ मा भ्यालेनटाइन डे मनाइन्छ । तर्क गर्नेहरुले त भन्छन्, यो पश्चिमा संस्कृति हो । आयतित संस्कृति हो । तर, प्रेमका पक्षपातीहरु भन्छन्, प्रेमको कुनै भूगोल हुँदैन । प्रेमको कुनै सीमा हुँदैन । प्रेम सर्वव्यापी हुन्छ । संभवत यस्तै मान्यताले नेपालमा पनि भ्यालेनटाइन डे धुमधाम मनाइने गरिन्छ । किन मनाइयो त भ्यालेनटाइन डे ? यसको सूत्रपात कसरी भयो ? खासमा तेस्रो सताब्दीमा एक रोममा एक शासक थिए, जसको नाम क्लोडियस । उनको मान्यता थियो, जब बिहे गरिन्छ पुरुषको शक्ति र बुद्धि नष्ट हुन्छ । त्यही कारण उनले राज्यमा यस्तो उद्घोष गरिदिए, ‘आजदेखि कुनैपनि अधिकारी वा सैनिकले बिहे गर्न पाउनेछैन ।’
तर, सन्त भ्यालेनटाइनलाई क्लोडियसको यो कुरा पटक्कै मन परेन । उनले फरमानको विरेध गरे । सन्त भ्यालेनटाइनले सबैलाई बिहे गर्नका लागि उक्साए । जागरुक गराए । यहि क्रममा केहि अधिकारी र सैनिकले बिवाह गरे । जब क्लोडियसलाई सन्त भ्यालेनटाइनले आफ्नो मान्यता विपरित प्रेम र बिवाहका लागि अरुलाई प्रेरित गरे, भ्यालेनटाइनलाई बन्दी बनाउने आदेश जारी भयो । उनलाईकालकोठरीमा बन्दी बनाइयो । आखिरमा सन्त भ्यालेनटाइनलाई फाँसी दिने भइयो । फाँसीको आदेश सुनेर सन्त भ्यालेनटाइनले जेलरकी दृष्टिविहिन छोरीको नाममा एक प्रेम पत्र लेखे । र त्यसको मुनी लेखे, ‘फ्रेम योर भ्यालेनटाइन ।’ यससँगै उनले प्रेमपूर्वक फूल उपहार पठाए । मृत्युअघि उनले जेलरलाई भने, ‘म मरेपछि मेरो आँखा तपाईकी आफ्नी दृष्टिबिहिन छोरीलाई दिनु ।’
राजाले सन् २६९ को १४ फेब्रुअरीमा भ्यालेनटाइनलाई फाँसी दिए । यहि दिनलाई भ्यालेनटाइनको समर्पणमा मानिसहरुले भ्यालेनटाइन डे मनाउन सुरु गरे । सुरुवाती दिनमा विधिवत् रुपमा भ्यालेनटाइन डे मनाइन्थ्यो । त्यसबेला प्रेमी-प्रेमिकाको हातले बनाइएको मुटु आकारको कार्ड आदनप्रदान गरिन्थ्यो । त्यसमा आफ्नो भावना व्यक्त गरिएको हुन्थ्यो । अहिले त्यस स्थानमा रेडिमेड कार्ड छाएको छ । पश्चिमा देशमा क्रिसमसपछि सबैभन्दा एक आपसमा कार्ड आदनप्रदान गर्ने भनेकै भ्यालेनटाइन डेमा हो ।
Previous यी युवतीको अनौठो हर्कत, भिडियोमा लामो भन्टा देखाउँदै यस्तो हाउभाउ देखाएपछि… (भिडियो सहित)
Next विशेषज्ञ भन्छन् ‘हृदयाघात भएर अस्पताल पुग्ने युवाको संख्या नेपालमा बढ्दो छ’